ဘုရားတည်ရှိသလား? - ဘုရားတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖိို့ ရှင်းလင်းတိကျသော အကြောင်းပြချက်များ ၆ ချက ်- ဘုရားရှိသလား?
ကမ္ဘာမြေဟာ နေနဲ့ တော်လျော်တဲ့အကွာအဝေးကနေ တည်ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ရရှိတဲ့ အပူချိန်လွှဲတွေကို တွက်ဆကြည့်ပါ၊ အကြမ်းဖျင်း -၃၀ ဒီဂရီကနေ +၁၂၀ ဒီဂရီထိရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ကမ္ဘာမြေသာ နေလုံးကနေ အနည်းငယ် ဝေးကွာမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အားလုံး အေးခဲသွားကုန်မယ်။ အနည်းငယ် နီးကပ်ပြန်မယ်ဆိုလည်း အားလုံးပြာကျကုန်မယ်။ နေကနေ ကမ္ဘာမြေရဲ့အနေအထား အနည်းငယ် တိမ်းစောင်းသွားတာနဲ့တောင် ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ သက်ရှိဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာမြေဟာ နေနဲ့ အံကိုက်အကွာအဝေးမှာ ရှိနေပြီးတော့ နေပတ်လမ်းကြောင်းအတိုင်း တစ်နာရီ ၆၇၀၀၀ မိုင်နှုန်းနဲ့ ရွေ့လျားလည်ပတ်နေတာပါ။ ပြီးတော့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး သင့်တင့်စွာ ပူနွေးစေရန်၊ အေးမျှစေရန် သူ့ဝင်ရိုးပေါ်တည်ပြီး လည်ပတ်နေပါတယ်။
ရေ - အရောင်မဲ့၊ အနံ့မဲ့၊ ပြီးတော့ အရသာမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရေမပါဘဲ ဘယ်သက်ရှိမှ မရှင်သန်နိုင်ပါဘူး။ အပင်တွေ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ လူသားတွေဟာ အဓိကအားဖြင့် ရေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ (လူ့ခန္ဓာ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ဟာ ရေပါ။) ရေရဲ့ထူးခြားသော လက္ခဏာတွေဟာ အသက်နဲ့ ဘာကြောင့်ထူးခြားစွာ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်ရသလဲဆိုတာ ကြည့်ရအောင်။
ရေဟာ အကန့်အသတ်မဲ့ဖျော်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ “ရေ” ဆိုတဲ့ပစ္စည်းဟာ လိုအပ်တဲ့ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ သတ္တုဓာတ်နဲ့ အာဟာရဓာတ်များကို ကျနော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး အသေးမွှားဆုံးသောသွေးကြောများထဲထိ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။၅
လူ့ဦးနှောက် - သတင်းအချက်အလက် အံ့ဖွယ်မြောက်များစွာကို တပြိုင်နက်တည်းမှာ စဉ်းစားလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်က သင်မြင်တွေ့သမျှ အရောင်များနဲ့ ဝတ္ထုများ၊ သင့်ဝန်းကျင်အပူချိန်၊ ကြမ်းပြင်ပေါ်က သင့်ခြေထောက်ရဲ့ဖိအား၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသံဗလံများ၊ သင့်ရဲ့ အာခေါင်ခြောက်သွေ့မှု၊ ပြီးတော့ သင့်ကွန်ပျူတာကီးဘုတ် အထိအတွေ့များကိုပါ ယူမှတ်သိုမှီးထားပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်က သင့်စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ အကြံအစည်တွေ၊ မှတ်ဉာဏ်တွေအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ပြီး စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ သင့်အသက်ရှူနည်းပုံစံ၊ မျက်ခွံလှုပ်ရှားမှု၊ ဆာလောင်မှု၊ လက်ဖဝါးပေါ်ကကြွက်သားများရဲ့လှုပ်ရှားမှုအစရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဆောင်ရွက်နေဆဲလုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများကို မှတ်သားပေးထားပါတယ်။
လူ့ဦးနှောက်ဟာ တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ တစ်သန်းထက်မက သတင်းအချက်အလက်များကို စဉ်းစားလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။၇ သင့်ဦးနှောက်က ဒီအချက်အလက်တွေအားလုံးရဲ့ အရေးကြီးမှုတွေကို ချင့်ချိန်ပြီးတော့ သိပ်အရေးမကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေကို စစ်ထုတ်ပါတယ်။ အဲဒီ စစ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဟာ သင့်ကို အာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့ အလုပ်မှာ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ခွင့်ပြုတဲ့အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ဟာ တခြားကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများနဲ့ မတူ တမူထူးခြားစွာ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကို နက်နဲသောဉာဏ်ပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်စွမ်း၊ ခံစားချက်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း၊ ကြံစည်စီစဉ်နိုင်စွမ်း၊ ကြံစည်စီစဉ်တဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ ပြီးတော့ အခြားသူများနဲ့ ဆက်ဆံနိုင်စွမ်း စတာတွေ ပါရှိပါတယ်။
(၃) ဘုရားတည်ရှိပါသလား? - စကြာဝဠာကြီးဟာ တူညီသောသဘာဝနိယာမတရားအတိုင်း လည်ပတ်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ?
“အထက်မြက်ဆုံးသောသိပ္ပံပညာရှင်များပင်လျှင် ဤအ့ံဖွယ်ရာကြောင့် မှင်သက်ကြလေပြီ။ စကြာဝဠာကြီးတစ်ခုအတွက် နိယာမများအတိုင်းလိုက်နာရန်၊ သင်္ချာနိယာမအတိုင်းသွားရန် ယုတ္တိယုတ္တာကျကျလိုအပ်ချက် မရှိပါပေ။ ဤအ့ံသြမှင်သက်ခြင်းသည် စကြာဝဠာကြီးက ဤနည်းအတိုင်း ပြုမူစရာမလိုအပ်ဟူသောဆင်ခြင်ခြင်းမှ အခြေခံလေသည်။ တဒင်္ဂမှ တဒင်္ဂအတွင်း အခြေအနေများ ပြောင်းလဲဖြစ်ပျက်တတ်သော (သို့) အရာဝတ္ထုများ ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်၊ ပျောက်ပျက်သွားလိုက်ဖြစ်တတ်သော စကြာဝဠာတစ်ခုအား စိတ်ကူးပုံဖော်ရန်ကား ပိုမိုလွယ်ကူလေ၏။”၁၁
(၄) ဘုရားတည်ရှိပါသလား? - ဒီအဲန်အေ ( DNA) သင်္ကေတစာက ဆဲလ်တစ်ခုရဲ့ပြုမူလုပ်ဆောင်ပုံကို သိစေတယ်၊ ညွှန်ကြားပေးတယ်။
ပို့ချမှု၊ သင်ကြားမှု၊ လေ့ကျင့်ပေးမှုအားလုံးမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ လမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ် ရေးသူတစ်ဦးမှာလည်း ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တိုင်းမှာ အသေးစားကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နဲ့ အများကြီးတူတဲ့ အလွန်အသေးစိပ်ကျတဲ့ သင်္ကေတစနစ်ညွှန်ကြားစာတွေ ပါနေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါရဲ့လား? သင်သိကောင်းသိပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတိုင်း၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုဟာ တစ်တွေ၊ သုညတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတယ်၊ ခုလိုလေ- ၁၁၀၀၁၀၁၀၁၀၁၁၀၀၀။ အဲဒါတွေ စီထားတဲ့အစီအစဉ်က ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကို ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ ညွှန်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ဆဲလ်တစ်ခုစီတိုင်းက ဒီအဲန်အေသင်္ကေတတွေဟာ အဲဒါနဲ့ လွန်စွာတူပါတယ်။ ဒီအဲန်အေကုတ်ဟာ A, T, G နဲ့ C ဆိုပြီး သိပ္ပံပညာရှင်တွေ အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်တဲ့ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းလေးမျိုးနဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေဟာ လူ့ဆဲလ်ထဲမှာ ခုလို စီရီပြီးရှိနေပါတယ်- CGTGTGACTCGCTCCTGAT စသည်ဖြင့်ပေါ့။ လူ့ဆဲလ်တိုင်းမှာ အဲဒီစာသင်္ကေတတွေဟာ သုံးဘီလီယံရှိပါတယ်!!
ဘာကြောင့် အဲဒါ ဒီလောက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းရတာလဲ? တစ်ယောက်ယောက် မေးလိမ့်မယ်- ဒီ အချက်အလက်ပရိုဂရမ်ဟာ လူ့ဆဲလ်တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဒီအတိုင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ ဘယ်လို ဖြစ်လာရတာလဲ? ဒါတွေဟာ သာမန်ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ အဲဒီသင်္ကေတစနစ်ကိုညွှန်ကြားတဲ့ ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် ဘယ်လိုကြီးထွားလာမယ်ဆိုတာ အတိအကျ အလွန်အသေးစိတ်ကျတဲ့နည်းအတိုင်း ညွှန်ကြားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ဘုရားတည်ရှိပါသလား? - ဘုရားက ကျနော်တို့ကို ရှာဖွေတဲ့အတွက် ဘုရားရှိမှန်းသိရပါတယ်။ သူဟာ ကျနော်တို့ကို သူ့အထံတော်လာဖို့ အဆက်မပြတ် နှိုးဆော်ရှာဖွေနေပါတယ်။
ကျမဟာ တချိန်က ဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ်ဦးပါ။ တခြားဘုရားမဲ့ဝါဒီတွေလိုပဲ၊ ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ လူတွေအကြောင်းက ကျမကို အရမ်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးပါတယ်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီတွေ ဖြစ်နေပြီးတော့ ဘာကြောင့်များ အချိန်၊ အာရုံစိုက်မှုနဲ့ အားထုတ်မှုတွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ ကိုယ်က ရှိတယ်လို့တောင်မယုံကြည်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက် ပြန်လည်ချေပနေကြရတာလဲ?! ဘယ်အရာက ကျမတို့ကို အဲလိုလုပ်စေတာလဲ? ကျမ ဘုရားမဲ့ဝါဒီဖြစ်တုန်းက ဆင်းရဲတဲ့လူတွေ၊ [ဘာသာရေးမှာ] လှည့်စားခံရတဲ့လူတွေ [လှည့်စားခံရတယ်လို့ ကျမထင်တဲ့လူတွေ]ကို ကူညီတဲ့နေရာမှာ အာရုံစိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဟာ အမှန်တရားအပေါ်အခြေခံထားတာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း နားဝင်အောင် ပြောပြတတ်ပါတယ်။ အဲ၊ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်၊ ကျမမှာ တခြားအကြောင်းရင်း ရှိပါတယ်။ ဘုရားယုံကြည်တဲ့သူတွေကို စိန်ခေါ်နေသလို တစ်ဖက်မှာလည်း သူတို့ကျမကို တနည်းတဖုံ ဆွဲဆောင်တရားချနိုင်မလားဆိုတာ စူးစမ်းသိမြင်လိုစိတ် ပြင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေ[မသိခြင်းတွေ]ကနေ လွတ်မြောက်ချင်တာလည်း တစိတ်တပိုင်းပါတာပေါ့လေ။ သူတို့မှားတယ်လို့ မငြင်းသာအောင် ကျမက အခိုင်အမာ ထောက်ပြနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စကပြတ်ပြီလေ။ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ဘဝနဲကိုယ် အေးဆေးသွားလို့ရပြီပေါ့။
ဒီလိုကြုံတွေ့တာ ကျမတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီနဲ့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မယ်လ်ကွန်မတ်ဂရစ်ဂျ်က “[ကျနော်] လေ့လာစူးစမ်းနေတဲ့အပြင်ကို သူ ကျနော့်ကို လိုက်လံရှာဖွေနေတယ်ဆိုတာ စိတ်က နားလည်ခဲ့ပါတယ်။”လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ စီအက်စ်လူးဝစ်စ်က “... စိတ်ထဲက အလုပ်ကို တစ်စက္ကန့်လေး ချလိုက်တာနဲ့ လုံးဝမတွေ့ကြုံချင်တဲ့‘သူ’ ရဲ့ မဆုတ်မနစ်၊ မရမက ချဉ်းကပ်ခြင်းကို ညစဉ်ညတိုင်း ခံစားနေရတယ်။ ကျနော် အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်၊ ပြီးတော့ ဘုရားဟာဘုရားပါပဲလို့ ဝန်ခံလိုက်ရတယ်။ ဒူးထောက်ပြီးတော့ ဆုတောင်းတယ်။ အဲဒီညမှာတော့ ကျနော်ဟာ အင်္ဂလန်တခွင်လုံးမှာ စိတ်မချမ်းမြေ့ဆုံးနဲ့ အတွန့်ဆုတ်ဆုံးသော ပြောင်းလဲသူ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။”
လူးဝစ်စ်က ဘုရားသိလာရတဲ့ရလာဒ်အနေနဲ့ “Surprised by Joy” ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျမတော့ ဘုရားရှိမှန်း တရားနည်းလမ်းကျကျ ဝန်ခံရုံမှတပါး တခြားဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လအတော်အတန်ကြာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကျမအပေါ်သူ့မေတ္တာကို အ့ံသြစွာ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။
(၆) ဘုရားတည်ရှိပါသလား? - အခြားဖွင့်ပြခြင်းအရာတွေနဲ့မတူ၊ ယေရှုခရစ်တော်ဟာ ကျမတို့ကို ဖွင့်ပြရာမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အရှင်းလင်းဆုံးနဲ့၊ အတိကျဆုံးသောပုံရိပ်တော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယေရှု? ဘာကြောင့်လဲ? ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတွေကို ကြည့်ပါ။ ဗုဒ္ဓ၊ မိုဟာမက်၊ ကွန်ဖြူးရှပ်နဲ့ မိုးဇက်တို့ အားလုံးက ဘာသာရေးသွန်သင်သူများ (ဝါ) ပရောဖက်*များလို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ပြကြပါတယ်။ ဘယ်သူမှ ဘုရားနဲ့တူညီကြောင်း၊ ဘုရားဖြစ်ကြောင်း မကြေညာကြပါဘူး။ အ့ံသြစရာကောင်းတာ ယေရှုကတော့ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ ယေရှုမတူရတဲ့အချက်ပါပဲ။ ယေရှုက ဘုရားရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြီး သင် ယခုပဲ သူ့ကိုတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ ခမည်းတော်အကြောင်းကို ပြောပြပေမယ့် အဲဒါ သူတို့နှစ်ဦးခွဲခြားဝေးကွာနေတဲ့ အနေအထားနဲ့ ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့၊ နီးကပ်ပြီး တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြောင်း၊ လူသားတွေရှေ့မှောက်မှာ အံ့သြဖွယ်တွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ကြောင်း ပြောခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုက သူ့ကိုတွေ့မြင်ရသူတိုင်းဟာ ခမည်းတော်ကိုတွေ့မြင်ရပြီ၊ သူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းဟာ ခမည်းတော်ကို ယုံကြည်ပြီလို့ ပြောပါတယ်။
အဲဒါ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊ အတင်းအကျပ်မဟုတ်ရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘုရားခွင့်လွှတ်တာ ခံယူပြီး သူနဲ့ဆက်သွယ်မှုထဲ ဝင်ရောက်လိုတယ်ဆိုရင်တော့ ယခုပဲ သင့်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့နဲ့ သင့်ဘဝထဲဝင်ရောက်လာဖို့ရာ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယေရှုက “ငါသည် တံခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက်နေ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၏ အသံကိုကြား၍ တံခါးကိုဖွင့်အံ့၊ ထိုသူရှိရာသို့ ငါဝင်၍ သူနှင့်အတူ စားသောက်မည်။ သူသည်လည်း ငါနှင့်အတူ စားသောက်ရလိမ့်မည်။”၁၉ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သင် အဲလိုလုပ်လိုပြီး ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာ မသိရင်တော့ ဒီဟာကအထောက်အကူ ဖြစ်ပါမယ်- “ယေရှု၊ ကျွန်တော််/ကျွန်မအပြစ်တွေအတွက် အသေခံခဲ့တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ်တော် ကျွန်တော််/ကျွန်မအသက်တာကို သိမြင်ပြီး ခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ ကျွန်တော်/ကျွန်မကို ခွင့်လွှတ်ဖို့နဲ့ ကျွန်တော််/ကျွန်မ အသက်တာထဲ ဝင်လာဖို့ အခု တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်/ကျွန်မ ကိုယ်တော့်ကို အမှန်အတိုင်း သိချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်/ကျွန်မ ဘဝထဲကို အခုပဲ ဝင်လာပါ။ ကျွန်တော်/ကျွန်မ နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိုခဲ့တဲအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အာမင်။”
စာရေးသူအကြောင်း - ယခင်ဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ်ယောက်အနေနဲ့ မေရီလင်းအာဒမ်ဆင်ဟာ သူမ အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြည့်ခဲ့တဲ့ ဆုတောင်းချက်တွေနဲ့ ဘဝအရည်အသွေးတွေကို ပြန်လည်ချေပဖို့ အခက်အခဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို စိန်ခေါ်ရင်းနဲ့မှ မေရီလင်းဟာ ဘုရားရှိကြောင်းညွှန်ပြတဲ့ မှန်ကန်တဲ့အထောက်အထားတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိနေတာကို အံ့သြစွာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်လောက် ခေါင်းမာမာနဲ့ သံသယထားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူမဟာ သူမဘဝထဲဝင်လာဖို့ ဘုရားရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို တုံ့ပြန်လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အမြဲရုပ်လုံးပီပြင်စေပြီး အလွန်ကောင်းကျိုးပြုတဲ့ ယုံကြည်ခြင်းကို သူ့အထံတော်မှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
(၁) ရောမ ၁း၁၉-၂၁ (၂) ယေရမိ ၂၉း၁၃-၁၄ (၃) R.E.D. Clark, Creation (London: Tyndale Press, 1946), p. 20 (၄) The Wonders of God’s Creation, Moody Institute of Science (Chicago, IL) (၅) Ibid. (၆) Ibid. (၇) Ibid. (၈) Hugh Davson, Physiology of the Eye, 5th ed (New York: McGraw Hill, 1991) (၉) Robert Jastrow; “Message from Professor Robert Jastrow”; LeaderU.com; 2002. (၁၀) Steven Weinberg; The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe; (Basic Books, 1988); p 5. (၁၁) Dinesh D’Souza, What’s So Great about Christianity; (Regnery Publishing, Inc, 2007, chapter 11). (၁၂) Richard Feynman, The Meaning of It All: Thoughts ofaCitizen-Scientist (New York: BasicsBooks, 1998), 43. (၁၃) Francis S. Collins, director of the Human Genome Project, and author of The Language of God, (Free Press, New York, NY), 2006 (၁၄) ရှင်ယောဟန် ၈း၁၂ (၁၅) ရှင်ယောဟန် ၁၄း၆